अस्ट्रेलियामा नकाबधारी लुटेरालाई लखेट्ने नेपाली चेली; को हुन् पबित्रा ? कसरी गरिन पसलको सुरक्षा ? » Nepalese Australian
साहासी नेपाली चेली, सुरपर मार्केटकी संचालक पबित्रा कार्कीको हिम्मतले लुटेरापछि हट्यो र पसल लुटिनबाट बच्यो । त्यसैले अहिले उनको प्रशंसा चुलिएको छ ।
पढनुहोसः नेपाली चेलीले नकाबधारी लुटेराको पसल चोर्ने योजना कसरी बिफल बनाईन ।
अस्ट्रेलियाको सुरक्षा संयन्त्र सक्षम भएपनि साना ब्यवसायीहरु बेलाबेला लुटेराको निशानामा पर्ने गरेका छन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण होे सिड्नीको ओबनमा नेपालीद्वारा संचालित क्याटमाडौं सुपर मार्केट ।
संचालमा आएको अढाई बर्षमा दुईपटक लुटेराको निशानमा परिसकेको छ यो पसल । गतबर्षपनि काउन्टर भित्रैपसेर चाडवाडको बेला केहीनगद सुपरमार्केटबाट लुटियो । दोस्रोपटक २८ जुन आईतबार साँझ फेरी उही नेपाली सुपर मार्केट लुटेराको निशानामा पर्याे ।
आईबार साँझ सातबजे र नौमिनेट गएको थियो । म पसलान एक्लै काम गरिरहेको थिए । मेरा साथीहरु किनमेल गरेर फर्किसकेका थिए । उनीहरु फर्केको दश मिनेट पछि पसलमा एउटा मान्छे आयो ।
सुपरमार्केट संचालक २३ बर्षिया पबित्राकार्की त्यो साँझको घटनको फेहरिस्त यसरी सुनाउछिन, “मुख सवै ढाकेको र हुँट लगाएको केटा मान्छे सरासर मेरो पसल भित्र पस्यो । मैले सोचे कुनै मेरो नियमीत ग्राहक होला, उ कुनै ड्रिङस किन्न आयो होला । तर, उ सिधै मेरो अगाडी तिर सुइसुइ आयो र भन्यो ‘गिभ मी मनी ।’ तर मैले बुझिन । ग्राहकले त आएर समान माग्नु पर्ने हो, उसले पैसा मागिरहेको छ । उनले मनमनै सोचिन । ‘सामान भएको ठाँउ तिर जानु पर्ने हो तर उत मेरो काउन्टर तिर पो आउन थाल्यो । त्यसपछि मेरो दिमागमा अनुमान लगायोे की यो पकै चोर हो ।’ अनि मैले रोक्ने प्रयास गर्दा हातपात भयो । फेरी उसले ‘गिभ मि मनी’ भन्दै मेरो काउन्टरबाट पैसा निकाल्न खोज्यो ।”
काउन्टर बाटै पैसा निकाल्न खोजे पछि त पबित्रालाई सय प्रतिशत चोर नै जस्तो लाग्यो । पवित्रा भन्छिन, “मैले प्रहरीलाई खवर पनि गर्न सक्थे । पैसा दिदापनि हुने थियो । तर, यस्तालाई केही पाठ सिकाउनु पर्छ भनेर आँट बटुले । उसले पैसा राखेको डयर तान्न खोज्दा फेरी हात हालाहाल भयो । तर म डराईन । उसले मेरो हात समातेको थियो । यसो दायाँवायाँ हेरेको चक्कु देखे ।
Video Screenshot, Photo Credit: 7NEWS Sydney
त्यही चक्कु समातेर नेपाली मै तलाई भन्दै चक्कु उझ्याएको त मेरो हात रोक्न खोज्यो । त्यसपछि मलाई लाग्यो । यो मान्छे डराउदो रहेछ । उसलाई पनि यो केटीले हानी हाल्छेकी जस्तो लागेछ । मलाई चाही चक्कु नहाने पनि लखेट्न चाही सक्छु भन्ने बिश्वास बढेर आयो । । मैले उसलाई चक्कु देखाएरै लखेटे । उ पसल बाहिर भाग्यो । फेरी मैले नेपालीमै त लाई भन्दै खेदाए । ” पबित्रा उक्त घटना सम्झदै भन्छिन्, “त्यती अंगे्रजी बोल्न पनि आएन ।”
हारगुहार गर्दा पनि नेपालीको साथ पाईन
हाम्रो पसलको छेउमा अरु नेपाली र अन्य समुदायको पनि पसल छ । यि पसलहरुम प्रयाजसो नेपाली ग्रहकहरुनै बढी आउँछन् । तर, त्यस दिन यस्तो आत्तिएको थिए । डराएको थिए र नेपाली मै चिच्याएको थिए ।
तर, मलाई हौसल्ला र सान्त्वना दिन मेरा वरीपरिका नेपाली कोही पनि आएनन, पबित्राले भन्नि “सायद थाहा नपाएर हो या पाएर ।”
उनले नै पसल संचालनमा आएपछि साँझ काम गरेको आइतवार पहिलो पटक हो । आईतवार साँभ जीवनमै सोच्दै नसोचेको विपक्ती आईलाग्यो । तर उनले गलत प्रवृतिको डटेर लडिन र सफल पनि भईन ।
यो उनको सफलताले सिंगो नेपालीजनको शिर उच्च भएको छ । समाजका विकृति र विंगति बिरुद्ध लड्नु पर्छ भन्ने शिक्षा पाएकी पबित्राको हिप्मत देखेर उनका बुवाआमा, शिक्षक र उनका साथी भाईहरुको खुशीको सिमा नाघेको छ । अस्ट्रेलियामा मात्र हैन, उनको जन्म थलो रौतहट चन्द्रनिगाहपुरमा पनि त्यतिकै चर्चा छ ।
बुबा र गुरु भन्छन, “सानै देखि जोसिली हो पवित्रा”
रौतहटको जुडिबेला माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा दशमा पवित्रालाई समाजिक शिक्षा पढाएका गोपाल आर्चाय भन्छन, “सानै देखि पबित्राको स्वभाव अरुसंग नडराउने थियो । विद्यालयका कार्यक्रमा उनले सधै नेतृत्व गर्थिन । साथीहरुवीचमा पनि सधै आँटिलीर जोशिली थिईन पवित्रा ।”
पढाईमा अब्ल हक्की बहादुरी स्वभावकी पवित्राले अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा पसल लुट्न आउने चोरलाई निडरका साथ खेदाएको सुनेर उनका गुरु गर्वले गदगद भएका छन् ।
अस्ट्रेलिया जस्तो शक्तिशाली देशमा आफ्नी कान्छी छोरीले दुश्मनलाई निडर र सहासका साथले लखेटेको देख्दा भूतपूर्व नेपाली सैनिक समेत रहेका पबित्राका बुबा गणेश कार्कीले नेप्लिज अस्ट्रेलियनसँग भने “यो मेरो छोरी मात्र नभएर सारा नेपाली छोरीहरुको गौरवको बिषयहो । सानै देखि जोस जागर भएकी निडर शाहासी उनी अन्यायको विरुद्धका सानै देखिनै वोल्ने गर्थि । म नेपाली सेनामा पनि जागिर खाएकाले उनीहरुलाई अनुशासनमा राखेको थिए । कसैलाई भेदभाव नगर्नु, न्यायको पक्षमा सधै रहनु र अन्यायको विरुद्धमा लड्ने शिक्षा सिकाएको थिए । छोरीहरुमा आएको त्यो उत्साह र आत्मविश्वास सुनेर गर्ब लागेको छ ।” स्याबास छोरी !
लुटेरा भगाएपछि डर लाग्यो
त्यो अधवैसे नकावधारी लुटेरालाई खेदाए पछि पबित्रा डरले लुगलुग काप्न थालिन । उनी त्यो घटनाको स्मरण गर्दे भन्छिन, “मेरो हात खुटानै लल्याक–लुलुक भयो । चक्कुपनि त्यही भुईमा खस्यो । पसलमा कोहीपनि छैनन् । त्यति बेला भन्दापनि अहिले चाँही डर लाग्छ । मेरा अगाडी त्यस्ता अधबैसे केटाहरु आए भने एकदमै डर लागेर आउँछ । मुटु ढुक ढुक गर्छ । रेलमा यात्रागर्दा कोही केटा मन्छे मेरो छेउमा आएर बस्यो भने डर लाग्छ । केटा मान्छे ग्राहक आउदा समेत त्यही हो की जस्तो लाग्छ ।”
यसघटनाले मनोबैज्ञानिक रुपमा आफू निकै त्रसित भएको पबित्राले नेप्लिज अस्ट्रेलिनलाई बताइन ।
मनोबैज्ञानीक त्रास कसरी रोक्ने
अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा कार्यरत मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर घनश्याम चापागाईले यस्तो अवस्थामा आफूलाई कसरी मानसिक तथा शारिरीक रुपमा सुरक्षित राख्ने बारे केही महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् ।
डाक्टर घनश्याम चापागाईका अनुसार प्रतिकार पछि तत्कालै आफूलाई असुरक्षित छु की भन्ने जस्तो लाग्न थाल्छ । त्यो मान्छे फेरी आउँछ की जस्तो लाग्छ । थ्रेटको महशुस भईरहन्छ हाम्रो दिमागमा । डरलागे जस्तो, मुटुको धडकन बढेजस्तो हुन्छ ।
डा चापागाईले भने, “अहिलको समयमा पवित्राले आफूले आफैलाई रियलाईज गर्ने आफूलाई ठीक गरेको छु भन्ने ठान्ने । आफूले आफैलाई पुरस्कृति गर्ने । आफ्नो वरिपरी भएको स्रोतहरुलाई परिचालन गर्ने । पसलमा आफूले कामगर्दा अर्को मान्छे पनि सँगै राख्ने हो की या एउटा सेक्युरिटी गार्ड राख्ने हो की या नजिको प्रहरीसँग पनि समन्वयन गर्ने हो की । जसले गर्दा कुनैपनि बेला आवश्यक पर्दा तुरुन्तै सहयोग लिन सकियोस । त्यसरी आफ्नो वरिपरी डेफेन्स ब्यरियर जस्तो बनाउने । नियमित काममा आउने ।”
क्याटमाडौं सुपर मार्केटमा आएको लुटेरको खोजी भैरहेको अबर्न प्रहरीले जनाएको छ ।
Wednesday 27th of October 2021 01:28:28 PM
Wednesday 27th of October 2021 01:28:29 PM